चुनाव जितेपछि ओलीको बोली फेरियो- महेश्वर शर्मा
Tuesday, 06.12.2018, 03:20pm (GMT5.5)
प्रजातन्त्रले समाजलाई उत्तरदायी बनाउँछ भनिन्छ । समाजलाई बाटो देखाउने दायित्व नेताको हो । जनतालाई ढाँटेर भ्रममा पार्ने काम नेताले गर्नु हुँदैन । तर, यहाँ नेता नै उत्तरदायी नभएर मनलागी बोल्छन् र गर्छन् भने प्रजातन्त्रप्र्रतिको जनविश्वास नै डगमगाउने स्थिति आएँछ । संसदीय व्यवस्था जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था हो । तर, यहाँ सत्ताधारी नै यो व्यवस्थापति विश्वास रादैनन् । प्रचण्डले नै पटकपटक भनेका छन्– यो व्यवस्थाप्रति हाम्रो विश्वास छैन भनेर । यसको अर्थ हो यो व्यवस्थालाई सत्तामा जाने भ¥याङ मात्र बनाउन चाहन्छन् र माथी पुगेपछि भ¥याङ भाँचिदिन्छन् ।
अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनवा जितेपछि प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सुधार–परिवर्तन ल्याएर समाजवादमा पुग्ने भनिरहेका छन् । चुनावमा एकथोक भन्ने र चुनाव जितेपछि अर्कोथोक गर्ने छलछामको प्रवृत्तिले प्रजातन्त्र त संकटमा पर्छ नै, अरुलाई झुक्याउँछौं भन्दा आफैंलाई पनि पिर्न बेर लाग्ने छैन । के बहुदलीय प्रतिस्पर्धामाा आएको स्वाङ मात्र हो त ? तपाईंहरुको सत्तारोहण नै ढाँटछलबाट भयो भने राम्रो होला र ? त्यसैले जनताका अगाडि बोलेका कुरा बिर्सनु भएन । फेरि विस्मृतिमा पुग्ने उमेर पनि त प्रधानमन्त्री ओलीजीको भएको छैन । त्यसैले ओलीले बोली फेरे भन्ने नपार्नोस् र बोलेका कुरा थोरै भए पनि पूरा गर्नोस् । अरु गर्न नसके पनि पंचायतकालमा स्थापित र अहिले खण्डहरु बनाइएका आठवटा औद्योगिक क्षेत्र र बन्द भएकाा कलकारखाना मात्र चलाईदिनुभयो भने पनि थोरै भए प्नि रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
भनिन्छ– सत्ताधारी प्रशंसाका भोका हुन्छन् । चिल्लो घस्नेले त्यो कुरा बुझेका हुन्छन् । त्यस्ताहरुले नै सत्तालाई प्रयोग गरेका छन् भन्ने नबिर्सियोस् । एकपटक माथी पुग्दैमा सधैं त्यही बसिरहन पाइँदैन । सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर पनि त्यहीं बसिरहन नसके जस्तै हो शक्तिको शिखर पनि । ढिलो चाँडो झर्नैपर्छ । त्यसैले राजनीति गर्नेले पनि आफ्नो आधार (जनता)लाई बिर्सन मिल्दैन । भन्ने बेलामा ‘जंगेले बोल्यो बोल्यो’ भनेझैं ओलीले बोलेपछि फरक पर्दैन, म भ्रष्टाचार गर्दिन, अरुलाई पनि गर्न दिन्न, प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार डलर पु¥याउँछु, दशलाख रोजगारी दिन्छु, वृद्धभत्ता पाँच हजार घरघरै पु¥याउँछु भनेको पनि आज नहुने हो भने त असनको साँढे डुक्रेजस्तो मात्रै हुन्छ प्रधानमन्त्री जी ! यो मामुली होइन, प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा हो । तपाईंकै व्यवहार झूठा भयो भने तपाईंका अनुयायीले के नगर्लान् ?
हामी जनताले पनि नबिसौैं यो दुनियाँ बलियाकै पछि लाग्छ भन्ने वास्तविकता हो । बल भनेको तागत या शक्ति रहेछ । त्यसैले आकर्षणमा सबै तानिंदा रहेछन् । त्यस्तो शक्ति मूलतः सत्तामा हुने र सत्तालाई पनि झुकाउने तत्वले प्रयोग गरिरहेको स्थिति छ आज । अपराधी, गुण्डा, मुन्द्रे, झ्यापुल्ले, दुव्र्यसनी, तस्कर, व्यापारी, कमिशनखोर जे भन्नोस्, ती सबै सत्ताधारीलाई नचाउने सामथ्र्य राख्छन् । शासनसत्ताकै तालाचावी तिनैका हातमा छ भनिन्छ । महंगी किनहुन्छ ? नक्कली माल (औषधि समेत) किन बजारमा छ्याप्छ्याप्ती छ ? कृत्रिम अभाव किन हुन्छ ? यो सबै त्यसै होइन, शक्तिकै घनचक्करमा भैरहेको छ । चुनाव जित्न नेतालाई तिनै चाहिन्छन् । ज्यादै हल्ला भएपछि आकलझुकल सरकार कार्वाहीको हल्ला चलाउँछ । अनि विस्तारै सेलाएको देखिएकै छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारा बनेपछि सिण्डिकेट हटाउने हल्ल्ला जोडका साथ चलेको छ । तर, भनेको सुनिन्छ– ‘सिण्डिकेटवालाहरुलाई तर्साएर धम्क्याएर थुन्ने मेलो मात्रै हो । चुनावकै सिण्डिकेटवालाहरुको खर्चमा जितेर आएकाहरुले सिण्डिकेट मास्छौं भनेर पत्याउने कुनै आधारा छैन ।’ यो भनाई पनि सर्वथा निराधार छ भन्न नसकिए पनि केही समय कार्वाहीको प्रतिक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ । यातायातको सिण्डिकेट तोड्यौं भनेर कुर्ले, तर खोई थोत्रा बस–ट्रकहरु हटेको ? खोई कोचाकोच गरेर भेडा बाख्रा थुनेजस्तो बस–माइक्रोबस र टेम्पोमा मान्छे राख्न छोडेको ? त्यस्ता सवारीका साधन पनि ठूलाबडा, नेता र तिनैका आसेपासेका भएपछि कसरी हट्छ ? होइन भने हटाएर देखाउन प¥यो नि !
भनिंदैछ– अहिले फेरि ठेकदारहरु तर्साउने काम भैरहेको छ । उनीहरुले बदमासी त्यसै गरेका छैनन्, नेताकै आडमा गरेका छन् । यो काम पनि अलि दिनपछि सेलायो भने बुझे हुन्छ– कुरा मिल्यो भनेर । ठेकेदारलाई त के छ र ? मालिक फेरिएको मात्रै त हो नि भन्छन् रे । के हुन्छ अलिदिन पछि थाा भैहाल्नेछ । अनि हल्ला हुन थाल्यो भने बजार अनुगमनको प्रचार हुन्छ, अनुगमनका नाममा कर्मचारीलाई छुट्टै भत्ता पनि दिइन्छ रे । हामी अनुगमन गर्न आउँदैछौं भनेर तिथिमिति र समय प्रचार गरेर गरिने यो ाकस्तो अनुमगन हो ? अनुगमन त छड्के पो हुनुपर्छ । कतै सिल ग¥यौं रे, कतै अखाद्य र विषाक्त वस्तु नष्ट ग¥यौं रे ! कहाँ कसरी केके कस्का रोहबरमा गरियो ? विधिपूर्वक भएको सार्वजनिक गर्न परेन ?
खाद्य सामग्रीमा सिण्डिकेट हटाउने नै स्वच्छ मनसाय हो भने ५–७ जना ठूला सेठलाई मात्र नियन्त्रण गरे बजार आफैं नियन्त्रण हुन्छ । दाल–चामल–तेल आपूर्ति गर्ने मिलवालालाई पहिले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । मूल जरो नसमात्ने अनि खुद्रा पसलेलाई मात्र कार्वाही गर्ने कुरा गरेर हल्ला गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अहिले जे भैरहेको छ त्यो देखावटी मात्र भएको छ यदि इमानदार हो भने पत्याउने किसिमबाट जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाउने गरी हुनुपयो । होइन भने जनताका निम्ति ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्नु बाहेक केही हुने छैन । त्यसकारण सरकारका बाचा कबोल पूरा गरेर देखाइयोस् र ‘चुनाव जितेपछि ओलीको बोली फेरियो’ भनेको सुन्न नपरोस् ।